यी हुन् समानुपातिकमा दोहोरिने कांग्रेसका १७ भाग्यमानी - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक सूचीबाट सांसद् बनेका १७ नेतालाई फेरि दोहोर्‍याएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिले समानुपातिकतर्फ नेत्री सुजाता कोइराला बाहेक अन्यलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेपनि कांग्रेसले १० नेताको नाम दोहोर्‍याएको हो।
किशोरसिंह राठौर, डिला संग्रौला, सर्वत आरा खान, प्रकाश रसाइलीसहितका कांग्रेस नेताहरु पहिलो पटक अन्तिम सूचीमा अटेका हुन। प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ भने ४० सिट जितेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ
काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दाबाट नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीले सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतले […]
कांग्रेस महासमिति वैठक : विवादका बीच अन्ततः विधान मस्यौदाका विषयमा सहमति,के-के भयो निर्णय ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले निकै विवादका बीच अन्ततः विधान मस्यौदाका विषयमा सहमति जुटाएका […]
अध्यक्ष ओलीसँग किन बिच्किए बामदेव ? भूमिकाविहीन बामदेवको रहर कि बाध्यता ?
काठमाडौँ । पाँच वर्षे स्थायी सरकारको नेतृत्व लिएर खुरुखुरु काम गर्ने बेला सरकार पार्टीको आन्तरिक किचलोमा […]
इन्धन शीर्षकमा मन्त्रीहरुको दोहोरा लालसा, मन्त्रालयको तेल हालेर नगद खल्तीमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शूल्य सहनशीलताको नारा दोहार्याइरहेका छन् । तर, उनी […]